Inona no atao hoe RSS? Inona no famahanana? Inona ny atao hoe syndication atiny? | Martech Zone
Inona no atao hoe RSS? Inona no famahanana? Inona ny atao hoe syndication atiny?
Alahady 25 aprily 2021 Alarobia, Oktobra 13, 2021 Douglas Karr
Na dia afaka mahita HTML aza ny olombelona, ​​mba hahafahan'ny sehatra rindrambaiko mandany atiny, dia tsy maintsy atao anaty endrika voavolavola sy azo vakiana ho an'ny fiteny fandaharana izany. Ny endrika izay ny fenitra an-tserasera dia antsoina fahana. Rehefa mamoaka ny hafatrao farany ao amin'ny rindrambaiko bilaogy ianao WordPress, dia fahana avoaka ho azy koa. Ny adiresy fahana anao dia hita amin'ny alàlan'ny fampidirana ny URL an'ny tranokala arahin'ny / feed /
Inona no atao hoe RSS? Midika inona ny RSS?
RSS dia antontan-taratasy miorina amin'ny tranonkala (antsoina matetika hoe a fahana or famahanana tranonkala) izay navoaka avy amina loharano iray - antsoina hoe ny fantsona. Ahitana lahatsoratra feno na voafintina ary metadata ny fahana, toy ny daty namoahana sy ny anaran'ny mpanoratra. Nesorin'ny RSS ny singa rehetra momba ny endrika sary an'ny tranokalanao ary navoakany tsotra izao ny atiny an-tsoratra sy ny fananana hafa toa ny sary sy horonan-tsary.
Ny ankamaroan'ny olona dia mino fa ny teny hoe RSS dia niorina tamin'ny voalohany Syndication tena tsotra fa izany dia Famintinana ny tranokala manankarena… Ary tamin'ny voalohany Famintinana ny tranokala RDF.
Ankehitriny dia matetika no antsoina hoe Syndication tena tsotra (RSS) ary ny marika manerantany ho an'ny fahana RSS dia toa izao eo ankavanana. Raha hitanao ao amin'ny tranonkala iray io marika io dia ahafahanao misintona an'io URL io hiditra ao amin'ny mpamaky fahana anao raha mampiasa iray ianao.
Ny mpamaky fahana dia malaza be mandra-pahatongan'ny sehatra media sosialy. Ankehitriny, ny ankamaroan'ny olona dia hanaraka fantsona media sosialy an-tserasera fa tsy hampiasa sy hisoratra anarana amin'ny fahana. Tsy midika izany fa tsy mbola azo ampiasaina ny teknolojia.
Ity dia fanazavana video taloha nefa tsara be avy amin'ny Common Craft manazava ny fomba fiasan'ny feed sy ny fomba hanararaotan'ireo mpampiasa ny True Simple Syndication (RSS):
Inona ny atao hoe Content Syndication?
RSS feeds azo ampiasaina amin'ny mamaky mpamaky ary famoahana media sosialy sehatra. Ny mpamaky fahana dia ahafahan'ny mpampiasa misoratra anarana amin'ireo fantsona tian'izy ireo vakiana matetika ary mamaky azy ireo amin'ny fampiharana. Mampahafantatra azy ireo ny mpamaky fahana rehefa misy atiny nohavaozina ary afaka mamaky azy ny mpampiasa nefa tsy mitsidika ilay tranonkala akory!
Ity fomba famahanana ho azy ny atiny ho an'ny mpamandrika sy ny sehatra ity dia fantatra amin'ny hoe syndication atiny.
Ny sehatra media sosialy matetika dia ahafahan'ny mpanonta mandefa ny atiny ho any amin'ny fantsom-piarahamonin'izy ireo. Ohatra, mampiasa aho Feedpress hampifangaro ny atiny ho an'ny kaontiko media sosialy manokana sy matihanina manerana ny LinkedIn, Facebook, ary Twitter. Ny fampiasana sehatra toa ny FeedPress dia ahafahanao manara-maso ny fitomboan'ny sakafonao.
PS: Aza adino misoratra anarana amin'ny RSS Feed anay!
Tags: syndication atinyFamintinana ny tranokalafamintinana tranonkala manankarenaRSSrss feedhaino aman-jery sosialyfahana amin'ny media sosialyinona no dikan'ny rssinona ny fantsonainona ny feedinona ny fantsona fahanainona ny famintinana ny tranokala rdfinona ny famintinana tranonkala manan-karenainona no fahana amin'ny Internetinona ny fantsona rssinona no tena syndication tsotrainona ny rss
Eto, Doug. Nisy zavatra azoko tokoa!! Tsy resy lahatra aho.
Woohoo! Tena nanam-paharetana ianao ry Christine. Matetika aho no mahazo teknika bebe kokoa amin'ny lahatsoratro. Noheveriko fa tonga ny fotoana hanamaivanana sy hanampiana ny sasany hanatratra.
Rehefa latsaka an-katerena amin'ity zavatra ity ianao dia sarotra ny mitadidy fa tsy ny olon-drehetra no mahalala izay lazainao!
Fanamarihana farany momba ny RSS. Alaivo sary an-tsaina hoe esorina ity pejy ity ho amin'ny teny sy sary ao amin'ny lahatsoratra fotsiny… miaraka amin'ireo entana tsy ilaina rehetra. Toy izany ny endriky ny lahatsoratra ao amin'ny fahana RSS!
Ny iray amin'ireo zavatra tokony hataoko dia ny mangataka an'i Douglas hanoratra fanazavana kely momba ny tena RSS is.
Misaotra an'io fitokonana mialoha io ry Doug. (ary aingam-panahy ho an'ny fizarana vaovao ao amin'ny bilaogiko ihany koa 😉)
22 Oktobra 2014 à 11:16
Manontany tena ianao izao hoe inona no lohahevitra informatika hampahatsiahivana anao amin'ny manaraka indray mamaky ny bokin'ny Genesisy lol.